कठघरामा उभिएकाहरूलाई | काव्यालय
कठघरामा उभिएकाहरूलाई | SATURDAYकलम | Kavyalaya - काव्यालय
by मेन्टालिक June 6, 2020
म स्वीकार गर्छु सबै पेश गरिएका प्रमाण म विरूद्ध छन् तथापि म यो दृढताका साथ इन्कार गर्नपनि सक्षम छु कि मैले उसको हत्या गरेको होइन । ऊ, जो सधै मेरो आत्माजस्तै मसँगै हुन्थ्यो, मेरो मित्रझैं प्रतिकार पनि गर्दथ्यो । म कसको कुरा गरिरहेछु तपाईंहरूलाई राम्रै अनुमान हुनुपर्छ । तर यो प्रकारको बयान मबाट अपेक्षाकृत थिएन होला । अपेक्षा त मलाई पनि थिएन कि उनिहरू अर्थात जहाँ ‘तपाईंहरू’ पनि ‘उनीहरू’ बन्नुहुन्छ यति सजिलै र यति छिटै मलाई हत्यारा प्रमाणित गर्नको नजिक पुग्नुहुनेछ ।
हुन त, धेरैको नजरमा मेरो चित्र एउटा अपराधी, एउटा हत्याराको रूपना प्रस्तुत गरिनेछ, प्रकट हुनेछ । र यो कुरा म फेरिपनि अस्वीकार गर्दछु कि मैले उसको, उसको मात्र होइन; मैले कसैको पनि हत्या गरिनँ । यो नियमानुसार जरूरी छैन कि तपाईंहरू यो कुरा- मेरो कुरालाई राजीखुशी स्वीकार गर्नुहोस् । गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो अपेक्षा पनि छैन । तपाईंहरूबाट भारी प्रश्नको अपेक्षा भने मज्जैले गर्दछु-
कसरी भन्छौ आफुलाई हत्यारा होइन भनेर ?
के तिमी बाट कुनै अपराध भएको नै होइन ?
त्यसो भए त्यो निर्दोष प्राणीको अन्त्य तिमी भित्र कसरी भयो ?
के यो तिमीले विरोध गर्ने ‘अप्राकृतिक हिंसा’को एउटा उदाहरण होइन ?
Blood and Feathers (DevianArt)
यस्तै यस्तै अन्य थुप्रै प्रश्नहरू हुन सक्छन् यदि तपाईंमा चेतना छ र सोच्ने बुझ्ने प्राकृतिक गुणलाई अप्राकृतिक ढङ्गले हत्या गरिदिनु भएको छैन भने; म यहाँ केही भन्न चाहन्छु । सम्भवत: केही उत्तरहरू । होइन होइन, यो मेरो कार्यको प्रतिको स्पष्टीकरण कदापी नठान्नु होला । न त हजुरहरूलाई विश्वस्त पार्न नै यो बयान दिँदै छु । म भन्दै छु किनभने मलाई भन्नु छ । यो मेरो निम्ति अपरिहार्य छ कि मेरो व्यक्तिगत कुण्ठित धारणा जो कि वैचारिक पनि हुन सक्छ, यहाँ पोखुँ ।
अँ, तपाईं त्यसमा सन्तुष्ट वा असन्तुष्ट हुने अधिकार केही हदसम्म पूर्ण रूपले राख्न सक्नुहुन्छ । त्यसपछि पनि कुनै शङ्का रहिरहन्छ भने कृपया प्रश्न गर्न नडराउनुहोस् । कम्तिमा पनि मलाई सोध्न नडराउनुहोस् किनभने यहाँबाट जे जस्तो फैसला सुनाइएला त्यो अकाट्य प्रायः छ । तपाईं त्यहाँ शङ्का र प्रश्न दुबै गर्न पाउनुहुन्छ तर सुनाउन पाउनुहुन्न । त्यो नियम, संवत र कानूनसिद्ध अधिकार हुँदाहुँदै पनि कानून र यसको अधिकार क्षेत्र भित्रको फैसलालाई प्रश्न गर्नु अपराध ठहरिन सक्छ । अनि, त्यसपछी के थाहा भोलिको बिहान, तपाईं यहाँ मेरो ठाउँमा उभिएर बयान दिनुपर्ने अवस्था पनि त आउन सक्छ । र सबैभन्दा तितो अवस्थामा तपाईंमाथि कानून कै हत्याको अभियोग लाग्न सक्छ ।
होइन होइन, मेरो अभियोग अर्कै हो , कानूनलाई प्राणीको व्यवहार गरिँदैन यहाँ । ती केवल केही अक्षर हुन् । कसैका लागि ईश्वर- ईश्वर; जसलाई कसैले मान्छ कसैले मान्दैन । कसैले पत्याउँछ कसैलाई वास्ता छैन । अँ, मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने, म पहिलोबाट दोस्रो भएको हुँ । पहिले-पहिले थाहाछैन कति समय अघिको कुरा हो, लाग्छ युग नै पो बितिसक्यो, म कानूनलाई ईश्वर र ईश्वरलाई कानून ठान्थेँ र दुबैप्रति प्रगाढ श्रद्धा र विश्वास पनि थियो । त्यसपछि अचानक के भयो, जसकारण नै म यहाँ छु । मलाई हत्याको आरोप लगाइयो । ईश्वर को ? कानून को ? थाहा छैन ! शायद मेरो आफ्नै हत्याको आरोपपनि हुनसक्छ यद्यपि म जिउँदै छु तर कानून बमोजिम यो प्रमाणित नहुँदासम्म म मृत नै ठहरिँदो हुँ । पक्कैपनि, कानूनले मृत ठानेको व्यक्तिको बयान कानूनसिद्ध जायज कसरी ठहरिन सक्छ ? र यो प्रश्नको जवाफ; क्षमा चाहन्छु मसँग छैन । यो कि त ती तराजु लिएर उभिएकी नायिकालाई थाहा होला कि त कानूनलाई ईश्वर ठान्ने तर नमान्नेहरूलाई थाहा होला ।
आफै विचार गर्नुहोस् त, उसको हत्या कसरी हुन सक्छ जसले पहिले नै मृत्युवरण गरिसकेको छ ? जसले सबथोक त्यागेर समाधिस्त भएर डुलिरहेको छ, उसलाई कसैले कसरी हत्या गर्न सक्छ ? मैले त केवल उसलाई मुक्त गरिदिएको हुँ । उसको बन्धन खोलिदिएको हुँ ताकी ऊ यो सानो पिँजडाबाट मुक्त भएर आफ्नोलागि आफै एउटा ठूलो कैदखाना रोज्न सकोस् । तर अफसोस, कैदी त म पो हुन आटेँ त्यो रोज्नै नपाई ?
Bird and the Cage (Pinterest)
के हामी यति पनि स्वतन्त्र छैनौँ कि हामी आफ्नो पिँजडा आफै रोज्न सकौँ ? अझ भनौँ, आफ्नोलागि एउटा कैदखाना आफै निर्माण गर्न सकौँ ? कति जाती हुने थियो यदि अरू नै कसैको त्यो ठूलो पिँजडाको छेकबारलाई हटाएर आ-आफ्नै स-साना पिँजडाहरूमा आफूलाई स्वतन्त्र छोडिदिन्थ्यौँ भने । ख्याल गर्नुहोस्, यहाँ म स्वतन्त्रताको कुरा गर्दै छु खुल्लातन्त्रको होइन !
के हामी आफ्नोलागि आफै बन्देज बनाउन अफैलाई सक्षम ठान्दैनौँ ? हामी यति साह्रो निरीह र काँतर कहिलेदेखि भयौँ ? तर यहाँ यो नै समान्यावस्था हो । यहाँ डराई डराई बाँच्नु र व्यवस्थाको चंगुलभित्र आफूलाई समर्पित गरिदिनु नै यहाँको नियति हो । आफ्नो इच्छाले बाँच्नु नै एउटा क्रान्ति साबित हुन जान्छ । एउटा यस्तो क्रान्ति जुन कहिल्यै सफल भएन । क्रान्ति, जसले फेरि अर्को प्रतिक्रान्तिको माग गर्छ ।
भन्नुहुन्छ भने, एउटा अपराध त गरेकै हो मैले, उसलाई मुक्त गरिदिएर । किनभने उसले आफूलाई आफैले मुक्त गर्नुपर्ने थियो । यहाँ ऊ मद्वारा नियन्त्रित हुनुपर्‍यो अझ भनौँ ममाथि आश्रीत हुनुपर्‍यो आफ्नो मुक्तिका निम्ति । यहाँ आएर म चूक खाएँ । यहाँ आएर मेरो विचार र मेरो कर्म एक-अर्कामा खण्डित भए । र त्यो विषम परिस्थितिमा म स्वीकार गर्दछु कि यो पाखण्डको एउटा अर्को सिमा हो र यहाँ आएर मलाई पाखण्डीको आरोप लगाउँदै तिरस्कार गर्नुहुन्छ भने म लज्जित हुँदै मुस्कुराइदिन सक्छु । र मेरो बयानले विचलित कदापी नहुनु तपाईंहरू तथापि म भन्छु कि म बाध्य थिएँ त्यतिबेला ।
त्यतिबेला, जब मैले निश्चय गरिसकेको थिएँ कि आफ्नो सिमा म आफै तय गर्छु, आफ्नोलागि आफै पिँजडा निर्माण गर्छु । त्यतिबेला, जब म आफ्नो पिँजडाको रूपरेखा कोर्नमा व्यस्त थिएँ, मेरो नजर एउटा सानो पिँजडाभित्र पर्‍यो जहाँ ऊ यतिसम्म निरीह भइसकेको थियो, उ छटपटाउन पनि सकिरहेको थिएन । हो, ठिक त्यति नै बेला मैले आफ्नो पिँजडा निर्माण गर्ने काम थाती राखेर उसको पिँजडा खोलिदिने निधो गरेँ । तर त्यतिबेला मभित्र यो भावना उत्पन्न हुँदै भएन कि, उसको पिँजडा खोलिदिँदा कसैले मेरो लागि पिँजडा बनाइदिने छ ।
र त्यसपछी जे जस्तो भयो तपाईंहरू साक्षी नै हुनुहुन्छ । अनि मैले बुझेँ, म जन्मिनु अगावै कसैले मेरो लागि एउटा ठूलो पिँजडा बनाइदिई सकेको छ । त्यो बाहेक मसँग अर्को कुनै विकल्प नै छैन । तर फेरि अर्को चेत खुल्यो, मेरा लागि मात्र होइन रहेछ त्यो पिँजडा, सबैका लागि त्यही एउटै पिँजडा रहेछ, तिनै बार रहेछन् उस्तै बन्देज रहेछ । मात्र एउटा ठूलो पिँजडाभित्र सानो पिँजडा र भित्र अर्को सानो पिँजडा, भित्र अर्को सानो पिँजडा, भित्र अर्को सानो …. । मैले कल्पना गरेझैं सबैका लागि छुट्टाछुट्टै पिँजडा असम्भव रहेछ । अब म स्वीकार गर्छु, यो कि, यो संसारमा केही कुरा असंभव छ भने त्यो कुरा, सबैका लागि छुट्टाछुट्टै पिँजडा हुनु हो ।
“World of Cages”
Designed by Shreeju Saral
त्यसरी कानून र न्याय पनि एउटा पिँजडा नै प्रतीत हुन आउँछ । तर त्यसमा निराश हुनुपर्ने केही, केही छैन किनभने यो पिँजडाले आफ्नो काम पूर्ण रूपमा पालना गरिरहेको छ अर्थात् योभन्दा ठूलो पिँजडा जसलाई हामी सत्ता भन्छौँ त्यसले राम्रो नियन्त्रण गरिरहेको छ- म यहाँ उभिनु नै त्यसको एउटा राम्रो प्रमाण हो । हुनसक्छ अब मलाई योभन्दा कैयौं गुणा सानो पिँजडा हुत्याइदियोस् र फेरि त्यहाँ मैले आफ्नो पिँजडाको रूपरेखा कोर्ने मौका पनि पाऊँ तथापि जस्तै त भनिसकेँ, असंभव हो । तर कल्पनाभन्दा ठूलो पिँजडा कुन छ र ?
र फेरिपनि आज यहाँ जे फैसला सुनाइयोस्, म चाहन्छु तपाईंहरू पनि आ-आफ्नो फैसला सुनाउनुहोस् कम्तीमा पनि मलाई । एउटा छुट्टै पिँजडा तपाईंहरू भित्रपनि छ मजबुतीको जाँच गर्नुहोस् । तपाईंका बारहरू कत्तिको बलिया छन्, आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोस् । निश्चिन्त हुनुहोस्; जस्तै ‘म’ निश्चिन्तताकासाथ भन्छु, “मैले कसैको हत्या गरिनँ ।”